फिल्म खेलेको १० लाख लिने माग्ने बुढा ? धुर्मससंगको सम्बन्धका बारे माग्नेले मुख खोले (हेर्नुहोस भिडियो) - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»फिल्म खेलेको १० लाख लिने माग्ने बुढा ? धुर्मससंगको सम्बन्धका बारे माग्नेले मुख खोले (हेर्नुहोस भिडियो)
फिल्म खेलेको १० लाख लिने माग्ने बुढा ? धुर्मससंगको सम्बन्धका बारे माग्नेले मुख खोले (हेर्नुहोस भिडियो)
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०१:५६ भिडियो
प्रेम गीत र म यस्तो गीत गाउंछु सफल भएपछि फिल्म नगरीमा सुदर्शन थापाको लोकप्रियता राम्रै चुलिएको छ । हुनत मेरो एउटा साथी छ निर्देशकका अक्सर फिल्मले हाइप राम्रै पाउंने गरेका छन् ।
आर्यन सिग्देल, प्रदीप खड्का र पल शाह जस्ता कलाकारहरुलाई स्टार बनाएका सुदर्शन थापा अहिले अनटाइटल प्रोजेक्टमा व्यस्त छन् । म यस्तो गीत गाउंछुबाट निर्माता समेत बनेका थापाले आफ्नो अपकमिङ प्रोजेक्टमा ‘माग्ने बुढो’ अर्थात केदार घिमिरेलाई फाइनल गरेका छन् ।
केदारलाई निर्देशक थापाले अनुबन्धन गरिसकेका छन् भने उनि हास्यकलाकारको टिमबाट निर्माण हुने फिल्ममा मात्र अभिनय गर्दै आएका यी कलाकारलाई अब सुदर्शनले एक्सन कट गर्नेछन् ।
फिल्मको संगीतको काम संगीतकार अर्जुन पोखरेलले काम गरी रहेका छन् । अपकमिङ फिल्म सदर्शनलाई निर्माणमा अभिनेत्री पुजा शर्माले साथ् दिनेछिन । पुजा फिल्मकी लिड हिरोइन पनि हुन् । सुदर्शन निर्देहित पछिल्लो फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउछु’ लाई दर्शकले रुचाएका थिए ।